कोरोना भाइरस बारे जान्नैपर्ने कुराहरु ! – दिव्य रोशनी अनलाईन
कोरोना भाइरस बारे जान्नैपर्ने कुराहरु !
डा.अरुण कुमार सिंह,
(उप–प्राध्यापक, बालरोग विशेषज्ञ वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान. धरान) /
चीनमा महामारीको रुपमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरस (२०१९ एनसीओभी) भाइरस चीनको बुहान प्रान्तमा प्रथमपटक मानिसमा सरेको थियोभने हाल यसको प्रकोप विभिन्न देशहरूमा फैलिरहेको छ । आज शनिवारसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या २ सय ७६ पुगेको छ । निको हुनेको संख्या ३६ रहेको छभने मृत्यु शुन्य रहेको छ । नेपालमा २ महिनाको बालक र ६ महिनाको बालिका पनि संक्रमित भइसकेका छन् ।
नेपालमा कोरोना संक्रमित दिन प्रति दिन बढ्ने क्रम जारी छ । कोरोना भाइरसले स्तनधारी जनावर तथा चराचुरुङ्गीहरूमा समेत रोग निम्त्याउने गर्दछ । मानिसहरूमा यसले श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग निम्त्याउने गर्दछ, जुन प्राणघातक पनि हुन सक्छ । हालसम्म यसको विरुद्ध कुनै खोप वा औषधिको आविष्कार भएको छैन ।
कोरोना भाइरस जनावरबाट सर्ने एक प्रकारको भाइरस हो । मानिसहरूमा कोरोनाभाइरस सर्वप्रथम सन् १९६० मा देखिएको थियो । अनुमान गरिए अनुसार जनावरबाट नै नयाँ भाइरसको सुरुवात भएको भनिए पनि यही जनावर भनेर पत्ता लागिसकेको छैन । अरु भाइरसमा यही जनावरबाट सर्छ भनेर भन्ने गरेका छन् तर यो नयाँ भएकाले भन्न सकिन्न । तर चीनमा नयाँ भाइरस मानिसबाट मानिसमा सरेको पनि पुष्टि भएको छ । अहिले संक्रमण फैलिएको भाइरस कोरोना समूहका अन्य भाइरसहरुसँग नमिल्ने भएकाले यसलाई २०१९ नोभेल कोरोना भाइरस नाम दिइएको छ । यो भाइरस चीनमा पत्ता लागेको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नयाँ कोरोना भाइरसलाई ‘२०१९–एन सिओभी’ (द्दण्ज्ञढ(लऋयख्) नाम दिएका छन् ।
कोरोना भाइरसको लक्षण के हो ?
कोरोना भाइरसको संक्रमित भए ज्वरो आउनु र खोकी लाग्नु,सास फेर्न गाह्रो हुने,छिटोछिटो सास फेर्नु । समयमा उपचार नभएका निमोनिया हुनु,सिभिएर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम हुनु,समयमा उपचार नभएका निमोनिया हुनु, मिर्गौलाले काम गर्न छोड्छ र मानिसको मृत्यु हुनसक्छ ।
– रुघाखोकी लागेको व्यक्तिको सोझो सम्पर्कमा नरहने ।
– भिडभाडमा सावधानी अपनाउने ।
– महत्वपूर्ण काम नपरेसम्म बाहिर ननिस्कने ।
– पौष्टिक आहारहरुको सेवन गर्ने ।
– वृद्धवृद्धा, बालबच्चा तथा रोगीहरुलाई विशेष ध्यान दिने ।
– माछामासु राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने ।
– अन्जान मान्छेहरुसँग धेरै घुलमिल नगर्ने,
– हात मिलाउनुको सट्टा टाढैबाट नमस्कार गर्ने ।
– हातले (नाक,मुख,आंँखा) मा नछुने ।
– व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने ।
– जीवित जनावरहरूको धेरै सम्पर्कमा नबस्ने ।
– खोक्दा हाच्छ्युँ गर्दा टाढा बस्ने या रुमालले मुख छोप्ने ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार कोरोना भाईरसबाट संक्रमित महिलाद्वारा नवजात शिशुको स्तनपान गर्दा कुनै खतरा नरहेको देखिन्छ । तथापि आमाले नवजात शिशुुको स्तनपान गराउँदा ध्यान राख्नु पर्ने कुराहरुः
– आमाले मास्क लाग्नु पर्छ र सांस लिनेमा हाईजीन सरसफाई नियमको पालन गर्नुपर्छ !
– नवजात शिशु लिनु भन्दा पहले र पछि हात धुनु पर्छ । यो नियमित र हरेक पटक गर्नु पर्छ।
– नवजात शिशुलाई घर वा अस्पताल जुन पनि ठाउँ तपाई जानु हुन्छ ,त्यहाँको सर–सफाईको विशेष ध्यान राख्नु पर्छ ।
कोरोना भाइरस विरुद्ध कुनै खोप वा औषधिको आविष्कार भएको छैन । कोरोना भाइरस विरुद्ध कुनै खोपको हाल दाबी गरे पनि आधिकारिक मान्यता दिएको छैन । यदि लक्षण देखिएमा चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्ने ।
(थप जानकारी लिनुपरे डा.अरुण कुमार सिंहलाई ९८४४२४१३९७ मा निःशुल्क लिन सकिन्छ ।)
← आगोले पोलेको प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने ?
गर्मी मौसमा देखिने कालाजारः लक्षण र बच्ने उपाय →